Warar Dheeraada Oo Kasoo Baxaya Booqashada Waftiga Madaxwayne Muuse Biixi Ee Itoobiya Iyo Saluug Laga Muujiyay Qodobada Lagu Gorfeeyay Kulankii Raysalwasaare Hailemaryam | Baydhabo Online
Warar naga soo gaadhaya ilo ka agdhaw waftiga Muuse Biixi Madaxwaynaha Somaliland ee Socdaalka ku tagay Itoobiya ayaa sheegaya in dawlada Itoobiya sadex arimood oo xaga amaanka ah kala hadashay Waftiga Somaliland.
Muranka iyo dagaalka Puntland iyo Somaliland ayaa lagu soo qaaday kulanka Raysalwasaare Hailemariam Desalign waxaana la cadeeyay in waftiga Muuse Biixi laga wargaliyay inuu iskaga baxo goobaha cusub ee ciidamada Somaliland la wareegeen ee Tukaraq iyo qaybo ka mida Sanaag.
Arinta Saldhiga Emaratka Carabta ayaa shaki Itoobiya ka muujisay waxaana Muuse Biixi laga wargaliyay inuu gabi ahaanba joojiyo saldhigaasi sidoo kalena waxaa Waftiga Somaliland laga wargaliyay in badhasaabada ama gudoomiyayaasha gobolada Somaliland shir loogu qabanayo xaga amaanka ah magaalada Jigjiga si dardar cusub loo galiyay wadashaqaynta Sirdoonka Itoobiya iyo lamaaha amaanka Itoobiya.
Mid ka mida raga ka agdhaw Madaxwayne Muuse Biixi ayaa Boramanews u cadeeyay in qorshaha Itoobiya ugu muhiimsanaa kaliya saldhiga Emaratka Carabta ee Berbera iyo shaqaaqada Tukaraq.Mar ay Boramanews wax ka waydiisay socdaalka Muuse Biixi ee Itoobiya waxa faa,iido uga soo baxay Somaliland waxa uu sheegay in danaha Somaliland kaliya lagu soo qaaday Berbera Coridor oo ah dhisamaha wadada Berbera iyo Itoobiya iskuxidha oo dawladii Rayaale saxeexday waxna kasuurto galin oo warbaahinta laga sheego.
Socdaalka Muuse Biixi ayaa kusoo beegmay qorshe Raysalwasaaraha Itoobiya ugu safrayay Masar oo xaalad adagi kala dhaxayso waxaana uu isla xalay Hailemaryam u safray Magaalada Qaahira Markii uu amar ku bixiyay in saldhiga Emaratka Ee Berbera la xayiro,taaso oo talaabo wanaagsan ku sheegeen siyaasiyiin warbaahinta mucaaridka Itoobiya ka waraysatay amaanka Itoobiya iyo carabta.
Iskusoo wada duuboo socdaalka Muuse Biixi iyo waftiga Somaliland ayay siyaasiyiin Boramanews lahadlay ku micneeyeen mid u muuqda sidii wakiil Itoobiya ah oo dhul ay maamusha warbixin laga dhagaysanayo isla markaana amaro cusub oo horleh loo soo dhiibay,shacabka Somaliland ayaa waftiga Madaxwayne Muuse Biixi ka dhagaysan doona warbixin Itoobiya laqabin.